ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - မိသားစုသုတေသီများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
မိသားစုသုတေသီများကများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2015): ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ရိုမန်းတစ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏သမိုင်းနှင့်လက်တွေ့ဆန်းစစ်ခြင်း
မိသားစုသီအိုရီ & ပြန်လည်သုံးသပ်၏ဂျာနယ်
Volume ကို 8, ပြဿနာ 2, စာမကျြနှာ 173-191, ဇြန္လ 2016
1 ဇွန် 2016 Doi: 10.1111 / jftr.12141
ဤဆောင်းပါးသည် ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းမှ စတင်၍ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏ရင်ခုန်ဖွယ်ဆက်ဆံရေးများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကျယ်ပြန့်စွာခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ စာပေများကိုမိသားစုသက်ရောက်မှုမှန်ဘီလူးများမှတဆင့်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်စားသုံးသူများ၊ အစိုးရအရာရှိများနှင့်မိသားစု ၀ င်များအနေဖြင့်ကတိသစ္စာပြုထားသောဆက်ဆံရေး၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်တွေ့ရှိချက်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှတဆင့်မိတ်ဖက်များနှင့်ဆက်ဆံရေးများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်ပြီး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းများကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်အထောက်အထားများမှာရောနှောနေဆဲဖြစ်ပြီးထိုသက်ရောက်မှုများသည်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုများဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤအသက်ရောက်မှုအခြေခံသီအိုရီအမြင်များဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။
, (Brannigan လူမှုရေးသိပ္ပံလူမှုရေးပျက်ဆီးတဲ့စီးရီးတွေနဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုချိတ်ဆက်သက်သေအထောက်အထားအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်အဖြစ်အငြင်းပွားမှုများ critiquing, ကိုလြော့နှင့်သက်သေအထောက်အထားကိုထှကျသှားစပွေီး 1991) ။ ဤအငြင်းပွားမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်စားသုံးသူများအားအကြမ်းဖက်မှုနှင့်မုဒိမ်းမှုများကိုကျူးလွန်စေနိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့်အဓိကသက်ဆိုင်သည် (Malamuth, Addison, & Koss, 2000), နဲ့အခြားဆိုးကျိုးများ-အပါအဝင်စားသုံးမှုသူတို့အားမိသားစုများနှင့်အပေါ်အတော်လေးနည်းနည်းအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိဆက်ဆံရေး-ကြပေမယ့်။ ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှစ်ဆဖြစ်ပါသည်:, ညစ်ညမ်း၏ပညာရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၏သမိုင်းဆန်းစစ်မိသားစုသက်ရောက်မှုမှသက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအခင်းဖြစ်ပွားရာအပေါ်ရောက်ရှိမည်နှောင်းပိုင်းကဖြစ်ရပြီအဘယ်ကြောင့်ဆွေးနွေးခြင်း, နှင့်မှန်ဘီလူးမှတဆင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှုများကျယ်ပြန့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးရန် မိသားစုသက်ရောက်မှု (Bogenschneider et al ။ , ၏ 2012) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစိစစ်ရေးကိုဆင်ဆာဖြတ်တောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများသည်မိသားစုများနှင့်ဆက်ဆံရေးများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအာရုံစိုက်ခြင်းမရှိဘဲလက်ရှိစာပေများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏မိသားစုတည်ငြိမ်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းခိုင်မာသည့်အထောက်အထားများပေးကြောင်းငါငြင်းခုန်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ဆက်ဆံရေးနှင့်မိသားစုများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းကိုပြသည့်တစ်ခုတည်းသောပေါ်လစီခေါင်းစဉ်မဟုတ်ပါ (Bogenschneider & Corbett, 2010) ။ အစိုးရများအနေဖြင့်မူဝါဒများကိုကျင့်သုံးသောအခါသူတို့သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အန္တရာယ်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုချက်ချင်းစဉ်းစားတတ်ကြသော်လည်းမိသားစုများအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားရန်နှေးကွေးတတ်သည် (Normandin & Bogenschneider, 2005) ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည်မူဝါဒ၏စီးပွါးရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်စီးပွားရေးပညာရှင်များနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းသို့မဟုတ်မူဝါဒ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုစစ်ဆေးရန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ by ည့်ခန်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်အစိုးရများသည်မိသားစုများ၏အရေးပါမှုကိုနှုတ်ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော်လည်းမိသားစုကိုဆုံးဖြတ်ရန်စနစ်တကျအားထုတ်မှုမရှိသလောက်ပင်။ လူမှုရေးပေါ်လစီသည်မိသားစုများအပေါ်မလိုလားအပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းသက်ရောက်မှု (Bogenschneider et al ။ , 2012).
ဂေဟစနစ်မိသားစုစနစ်များသီအိုရီ, Bogenschneider et al ၏ရှုထောင့်ကနေ။ (2012မိသားစုအကျိုးသက်ရောက်မှုချဉ်းကပ်မှု၏အခြေခံမူ ၅ ချက်ကိုရေးဆွဲထားသည်။ (က) မိသားစုတာဝန်၊ (ခ) မိသားစုဆက်ဆံရေး၊ (ဂ) မိသားစုမတူကွဲပြားမှု၊ ()) မိသားစုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့် (င) မိသားစုတည်ငြိမ်မှု။ ဤဆောင်းပါးသည်ဤအခြေခံမူများ၊ မိသားစုတည်ငြိမ်မှုကိုအဓိကထားသည်။ မိသားစုထိခိုက်မှုမှန်ဘီလူးများသည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မတည်ငြိမ်မှုများ (ဥပမာပြိုကွဲခြင်း၊ ခွဲနေခြင်းသို့မဟုတ်ကွာရှင်းခြင်း) စသည်တို့ရှိသည့်မိသားစုများသည်ကလေးများအတွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသောရလဒ်များနှင့်လူကြီးများအတွက်စီးပွားရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကြောင့်ဖြစ်သည် (A. Hawkins & Ooms, 2012).
ညစ်ညမ်း၏မိသားစုသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့, ငါစည်းကမ်းချက်များများအတွက် Google Scholar ရှာဖွေနေတဲ့စနစ်တကျစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ယူ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ရှာဖွေရေး (သြဂုတ်လ 1, 2014) ၏နေ့စွဲမတိုင်မီထုတ်ဝေလေ့လာမှုများအဘို့ခေါင်းစဉ်နှင့် abstraction ဆန်းစစ်။ ငါထို့နောက်အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီကိုဖတ်ရှုခြင်း, သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများတစ်ဒေတာဘေ့စပြုစုနှင့်ငါ့ကနဦးရှာဖွေရေးလွဲချော်လေ့လာမှုများအဘို့ကိုကိုးကားကဏ္ဍများကိုဆန်းစစ်။ ကျွန်မစိုးရိမ်ပူပန်မှုအရွယ်ရောက်လိင်ကွဲရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးကြောင်းလေ့လာမှုများဤအထူးသဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ကန့်သတ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးဒေတာဘေ့စ, ညစ်ညမ်းစေရန်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအမျိုးမျိုးအပေါ် 623 ဆောင်းပါးများပါဝင်သည်။1
လေ့လာမှုအနည်းငယ်ကဆက်ဆံရေးအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုဖော်ထုတ်သောကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးနှင့်လက်မထပ်ရသေးသောစုံတွဲများနှင့်သီးသန့်သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုခွဲခြားရန်မကြိုးစားပါ။ (ထင်ရှားသောခြွင်းချက်တစ်ခုရှိသော်လည်း Bridges, Bergner, & Hesson ‐ McInnis, 2003) ။ ငါပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်းပါးတွေအဘယ်သူအားမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုစုံတွဲများနမူနာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြင်, ကအချိန်မတိုင်မီလိင်စိတ်တိမ်းညွတ်ဖြတ်ပြီးတွေ့ရှိချက်မဆိုယေဘုယျဖို့မသင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားသူများကိုသူတို့အားသက်ရောက်မှု (Horvath et al ၏အကျဉ်းချုပ်ပေးပေမယ့်ငါသည်လည်း, သားသမီးသို့မဟုတ်မိဘကလေးဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှုကိုဖုံးလွှမ်းကြပါဘူး။ , 2013; Manning, 2006) ဒီပြန်လည်သုံးသပ်၏ .Another အရေးကြီးသောန့်အသတ်, အထူးသဖြင့်လိင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်း-နှင့်ပင်ကိုယ်မူလသုတေသန-ငါပြန်လည်သုံးသပ်တစ်ဦးချင်းစီပုံမှန်အားလျော့နည်းအခြားအနောက်နိုင်ငံများလူ့အဖွဲ့အစည်း (Hofstede မှဆွေမျိုးအခြားရွေးချယ်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များလက်ခံကြသည်ရှိရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, နေရာယူထားပြီးတာတာ 1998) ။ ဤရွေ့ကား, ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုသြစတြေးလျအတွက်လေ့လာမှုများ (McKee ဘို့ဥပမာ, အခြေအနေတွင်များကိုကူညီရန်, 2007) သို့မဟုတ်နယ်သာလန် (Hald & Malamuth, 2008) ပါဝင်သူများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၏အပြုသဘောဆောင်သည့်လက္ခဏာများကိုအလေးထားပြောကြားခြင်းသို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအစိုးရကော်မရှင်များအတွက် (ဥပမာ၊ ရှေ့နေချုပ်မှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံဆိုင်ရာကော်မရှင်၊ 1986) တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရှုံးသောအခါအလင်း (Einsiedel အတွက်ညစ်ညမ်းပြပြီ, 1988).
သမိုင်းကြောင်းအနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျော်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအငြင်းပွားဖွယ်ရာရှိခဲ့သည် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း နှင့်ပစ္စည်းမျိုးကကိုဖော်ပြရန်သငျ့သညျ။ ( "ပြည်တန်ဆာအကြောင်းကိုရေးသားခြင်း" တစ်ဂရိအသုံးအနှုန်းမှဆင်းသက်လာporno = "ပြည်တန်ဆာ" graphy = "အရေးအသား"), စကားလုံး၏ခေတ်သစ်လျှောက်လွှာကိုက်ညီမှုရှိခဲ့သည် (က Short, အနက်ရောင်, စမစ်, Wetterneck, & ဝဲလ်, 2012) နှင့်မကြာခဏဖွားများအပေါ်ရှုတ်ချခေါ်ဆို (ဂျွန်ဆင်, 1971), အချို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများ "(ဥပမာ, Peter & Valkenburg, ဟူသောစကားစု၏မျက်နှာသာအတွက်ဟူသောဝေါဟာရကိုစွန့်ခွာရန်အချို့သော 2010) ။ အစောပိုင်း antipornography သားအမျိုးသမီးရေးဝါဒီအဖြစ်ညစ်ညမ်း defining, ဒီရှုပ်ထွေးဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်,
၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားအတွက်ဂရပ်ဖစ်ကိုလည်းနာကျင်မှုသို့မဟုတ်အရှက်သို့မဟုတ်မုဒိမ်းကျင့်ခံစား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထု, အမှုအရာ, ဒါမှမဟုတ်ကုန်စည်အဖြစ် dehumanized အမျိုးသမီးတွေပါဝင်သောဓာတ်ပုံများကိုသို့မဟုတ်စကားလုံးများကိုမှတဆင့်အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်အောက်ငယ်သား, တက်ချည်ထားခံရ, ထခုတ်ခုတ်ထစ်ဖျက်ဆီးနာကျင်စွာထိုးခြင်း, သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေ, ညစ်ညူးသောသို့မဟုတ်ယုတ်ညံ့အဖြစ်ပြသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်သွင်းခဲ့တဲ့သို့မဟုတ် servility သို့မဟုတ် Display, အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်ထိုးဖောက်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ, လျှော့ချ, ဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးခြင်း၏အခြေအနေတွေအတွက်တင်ပြ, ဒဏ်ရာ, နှိပ်စက်ညှင်းပန်း, သွေးထွက်ဤအခြေအနေများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစေသည်တစ်ဦးအခြေအနေတွင်နာကျင်စွာထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထိခိုက်စေ။ (MacKinnon, 1985, p ။ 1)
ဤသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ် (မဟုတ်ရင်ချေါယောက်ျားမိန်းမတို့အကြားတန်းတူညီမျှမှုပုံဖော်ကြောင်းလိင်၏ display ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေချိန်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုးအဘို့အရွံရှာဘွယ်ဖော်ပြတဲ့နည်းလမ်းခဲ့သည် erotica; Steinem, 1980) ။ ဘယ်လိုအသုံးအနှုန်းအတွက်သိသိသာသာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့ခွင့်ပြုခဲ့သေးပါကဤချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းပေးခြင်းအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်း၏ပျက်ကွက် (ထို့နောက်ယခုအခါအများကြီးခေတ်ရေစီးကြောင်းညစ်ညမ်းဖော်ပြပေးသော) "ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုလျှော့ချ [အမျိုးသမီးများ၏]" မြင်ကွင်းများ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုအဖြစ်ဂုဏ်သိက္ခာကိုကင်းမဲ့စေ [အမျိုးသမီးများ၏]" ကြောင်းသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတွေပြသ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်သွင်းခဲ့တဲ့၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားအတွက်" သို့မဟုတ်ပါဝင်သည်နိုင် ။ ဤသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အချို့သောစာရေးဆရာများညစ်ညမ်း (Itzin အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုအပြစ် တင်. လိုင်စင်ပေးခဲ့တယ် 2002) နှင့်၎င်းသည်အခြားသူများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ (ဆိုလိုသည်မှာအဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့်ပျက်စီးခြင်းပုံဖော်ခြင်းများကဲ့သို့) ကိုညင်သာပျော့ပျောင်းသောလိင်အင်္ဂါပုံဖော်ချက်များ (ထင်ထင်ရှားရှား) မှခွဲထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းရာတွင် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ 1986; Willis, 1993).
သို့သျောလညျးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်တသမတ်တည်းအားထုတ်မှုရှိခဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ (ဥပမာ - Hald & Malamuth၊ 2008; Mosher, 1988; ညစ်ညမ်းသောနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပေါ်ကိုအမေရိကန်ကော်မရှင်, 1972) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲသူများနှစ် ဦး စလုံး၏အသုံးအနှုန်းကိုယေဘူယျအားဖြင့်လက်ခံခြင်းကြောင့်ထိုသို့သောအသုံးပြုမှုသည်မသင့်တော်သော (သို့) အထူးသဖြင့်ညံ့ဖျင်းခြင်းမရှိဟုထင်ရသည် 2007) နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသူ့ဟာသူ (Taube, 2014) ။ ကျွန်မတစ်ဦးအလုပ်လုပ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ချမှတ်, ဒီဝိညာဉျတျောထဲမှာအသုံးအနှုန်းကိုသုံးပါ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ပုံမှန်အားဖြင့်ကြည့်ရှုသူကိုနှိုးဆှဖို့ရည်ရွယ်ထားနှင့်ဗလာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသရုပ်ဖော်ကြောင့်ပစ္စည်း (ရေးသားထားအပါအဝင်) အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်အဖြစ်။ Donnerstein, ငါသည်လည်း sadomasochism, ကျွန်ခံ, မုဒိမ်းမှု, သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု၏အခြားပုံစံများ၏အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်း (ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုခွဲခြား 1980b) erotica (မိတ်ဖက်များအကြားတန်းတူညီမျှအပျြောအပါးနှင့်အပါဝင်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအကြမ်းမဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထံက၎င်း, Steinem, 1980) နှင့်ယုတ်ညံ့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ (အမျိုးသမီးများအားအရူးအမူးစွဲလမ်းစေသောလိင်အရာ ၀ တ္ထုများအဖြစ်သတ်မှတ်သည့်အကြမ်းမဖက်သောလိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်း၊ Zillmann & Bryant,) 1982).
ဤအပိုင်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောပညာရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလေ့လာမှု၏လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအဓိကပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုများကိုလမ်းညွှန်ပြီး ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများကိုပုံဖော်ခြင်းကိုအကျဉ်းချုံးထားသည်။ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသမိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၏စိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်သက်ဆိုင်မှုမှအာရုံလွဲသွားစေပုံကိုအကျဉ်းချုံးခြင်းဖြင့်ဤအပိုင်းကိုနိဂုံးချုပ်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်ဆယ်စုနှစ်ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးနှင့်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ရုန်းကန်မှုများအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများ၏အချိန်တည်း။ များစွာသောထူထောင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကန့်သတ်ရုပ်သိမ်းခံရဖို့စတင်ခဲ့နှင့်အမျိုးမျိုးသောတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများညစ်ညမ်း၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူး (Marwick အပါအဝင်တန်ပြန်ဒြပ်စင်ခိုင်ခံ့စေခြင်းဖြင့်ထောက်ခံဖြစ်လာခဲ့သည် 1998) ။ မြို့ပြငြ့်အရေးဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ (Orfield အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်အစိုးရများကအဲဒီယဉ်ကျေးမှုငြင်းခုံမှုများအတွက်ကြားဝင်ရန်တာဝန်ကျင့်သုံး, 1969ဥပဒေစတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့်တရားရေးညွှန်ကြားမှုအပေါ်ရာဇဝတ်မှု, အကြမ်းဖက်မှု, နှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး (အမေရိကန်ကော်မရှင်ဆန်းစစ်) နှင့်အစိုးရကော်မရှင်, 1967; ယင်းအကြောင်းရင်းများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးအပေါ်အမေရိကန်ကော်မရှင်, 1970) ။ ဤရွေ့ကားအနှစ်ကိုလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အနောက်ကမ္ဘာ (Friedan တစ်လျှောက်လုံးအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုသစ်တစ်ခုလှိုင်းဖြစ်စေခဲ့သည်ထားတဲ့သိသိသာသာကျားမမညီမျှမှုကြောင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြသည်, 1963).
သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုကိုဆီသို့လပ်ြရြားမြ unopposed မခံမရပ်ခဲ့ပါဘူး။ 1962 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးမီဒီယာထိုသို့သောငျြ့တရားအဖြစ်အဖွဲ့များ, ညစ်ညမ်းပစ္စည်း (Wilson က၏ရောက်လာနှေးကွေးရန် "ကိုယ်ကျင့်တရားအများစု" ၏ဆွေမျိုးများသဘောတူညီမှုကိုအသုံးပြု 1973) ။ ဤရွေ့ကားတပ်ဖွဲ့များအမြိုးသမီးမြား (Millett ကျော်အထီးပါဝါအားဖြည့်အဖြစ်ညစ်ညမ်း critiqued သောအစွန်းရောက်အမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုကပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်, 1970) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏စရိုက်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း၊ လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ 1973).
မိသားစုနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပညာရှင်များလိင်အပေါ်အပြင်းအထန်ဆွေးနွေးငြင်းခုံအတွက်စေ့စပ်ပေမယ့် (ဥပမာ Grove 1938; R. Rubin က, 2012), ညစ်ညမ်းမဟုတ်ဘဲလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များထက်အတွေးအခေါ်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုခေါင်းစဉ်နျြရစျ။ မိသားစု-related သုတေသနင်း၏နို့စို့အရွယ်မှာသူ့ဟာသူကြီးနှင့်အနည်းငယ်အပြည့်အဝညစ်ညမ်းရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး ( R. Rubin က, တခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုနားလည်ရန်အနေအထားရှိကြ၏ 2012; Wilson က, 1973) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလေ့လာမှုကို ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်သဘာဝအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည် (ဥပမာ Thorne & Haupt, 1966)၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်နှိုးဆွခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် variable များကိုဖော်ထုတ်ခြင်း (ဥပမာ Byrne & Sheffield, 1965) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလသုတေသန (ဥပမာ Kinsey, တိုးချဲ့ခဲ့သော်လည်း 1953), ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်လေ့လာမှုများ 1970s မတိုင်မီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လည်းမရှိခဲ့ချေ။
တရားရုံးချုပ်ညစ်ညမ်းသောပစ္စည်းများပုဂ္ဂလိကအပိုင် policing ပြည်နယ်ဥပဒေများကိုဒဏ်ခတ်သောအခါ (1969 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့Stanley v ။ ဂျော်ဂျီယာ, ၁၉၆၉) လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှုများကိုစတင်စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ကြသည် (ဤဥပဒေရေးရာပြofနာများကိုအသေးစိတ်အကျဉ်းချုပ်အတွက် Funston တွင်ကြည့်ပါ။ ) 1971) ။ တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုပိတ်ပင်ထားရန်လိုအပ်သည့်အထောက်အထားအမျိုးအစားကိုရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုမှုအတွက်ကန့်သတ်ထားသည့်တိုင်အခြားသူတို့၏ဘဝကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကအမျိုးသားများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေ၊ ကာယပိုင်းအရဖြစ်စေအကြမ်းဖက်မှုကိုအမျိုးသမီးများအပေါ်ကျူးလွန်စေသည်ဟုသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိပါကတရားရုံး၏စီရင်ချက်မှလိုအပ်သောအနှုတ်လက္ခဏာပုံစံကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကအလျင်အမြန်မဲပေးခြင်းဖြင့် ၁၉၇၀ ခုနှစ်သမ္မတအိုဘားမားနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ 1972), ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုသိပ္ပံနည်းကျအကဲဖြတ်ပေးပြဌာန်း။
အဆိုပါ 1970 ကော်မရှင်
တစ်ဦးအတိုင်းအတာများသို့မဟုတ်သီအိုရီအခြေခံအုတ်မြစ် (Wilson ကမရှိခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေပြင်းထန်သောအချိန်ဖိအား (ဆိုလိုသည်မှာ, သုတေသီများအပြည့်အဝအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်မှ9လအတွင်းခဲ့ပြန်တမ်း), facing နေသော်လည်း 1971), ကော်မရှင်, ညစ်ညမ်းသောနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပေါ်တွင် "ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထိတွေ့လူငယ်သို့မဟုတ်လူကြီးများအကြားတွင်ဆိုးသွမ်းသို့မဟုတ်ရာဇဝတ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ causation အတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍထိုရက်စွဲရန်မယုံကြည်စိတ်ချရသောအထောက်အထားကို" (အမေရိကန်ကော်မရှင်ရှိကွောငျးကိုကောက်ချက်ချ 1972, p ။ 169) ။ ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုသည်မီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်“ လစ်ဘရယ်စံသတ်မှတ်ချက်” အမြင်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် (Linz & Malamuth, 1993), အရာသည်တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေမီဒီယာအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်မဟုတ်လျှင်ဆင်ဆာဆန့်ကျင်။ ထိုကဲ့သို့သောကွာရှင်းခြင်းနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါအပေါ်သက်ရောက်မှုကဲ့သို့သောအခြားဆိုးကျိုးများ, ပိုင်းတွင်ပါဝင်ဘို့စဉ်းစားပေမယ့်ကော်မရှင်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အထောက်အထားအလွယ်တကူကောက်ယူနိုင်ခံစားခဲ့ရသောအကြောင်းအရာများ (ဂျွန်ဆင်, ကို ရွေးချယ်. ခဲ့ကြသည် 1971) ။ ကတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံအကြောင်းကြားခဲ့ပါဘူးအဖြစ်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏တည်ငြိမ်မှုကိုမှထိခိုက်မှု, အလယ်တန်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကော်မရှင်အိမ်ထောင်သည်ကြားတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ရေတိုရေရှည်သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်လေ့လာမှုတစ်ခု (မန်းတို့ပါဝင်သည်လုပ်ခဲ့တယ်ပေမယ့် 1970) ဤကိစ္စများမုဒိမ်းမှု, ရာဇဝတ်မှု, အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ကျူးကျော်၏လေ့လာမှုများထက်ဝေးလျော့နည်းအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးထင်ရှားတဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုထားတဲ့ကျားမတန်းတူရေး (ဆက်စပ်သောဆိုးကျိုးများ; ဥပမာ Dworkin, 1985) လည်းဖြစ်ကောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်များ၏ဆွေမျိုးမရှိခြင်း၏, နည်းနည်းအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။2
ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရန်မဲပေးသူနိုင်ငံရေးသမားများက၎င်း၏သုံးသပ်ချက် (နစ်ဆင်, ပယ်ချခဲ့ပေမယ့် 1970; Tatalovich & Daynes, 2011), ပညာရေးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်များစွာသောသူတို့ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ပညာရှင်အချို့ကကော်မရှင်၏နည်းလမ်းများနှင့်တွေ့ရှိချက်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုများကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဥပမာ Cline သည် US Obscenity and Pornography ဆိုင်ရာလူနည်းစုအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ 1972) ဒါပေမဲ့အဲဒီစိန်ခေါ်မှုများပညာရှင်များနှင့်အထွေထွေလူထု (Simons သည်နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံး, နည်းနည်းအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိ 1972) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်ရန်လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များကသဘောတူခဲ့သည် (Malamuth & Donnerstein, 1982), နှင့်ပညာရှင်များသည်စားသုံးမှု၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပုံမပေါ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများဆိုင်ရာသုတေသနလှိုင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဥပမာ - ဘရောင်း၊ အမိုရာရို၊ ၀ ယ်၊ 1973).
ကော်မရှင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည့်နှိုးဆွမှုနှင့်ကျူးကျော်မှုများအကြားဆက်စပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျူးကျော်မှုသုတေသီများဖြစ်သည်။ (Mosher & Katz, 1971), အဘယ်သူသည်ရှေ့ဆက်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအပေါ်သုတေသနပြုရွှေ့မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ထိတွေ့သူသင်တန်းသားများကို (Zillmann ထိတွေ့မခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုပြုလေ၏ထက်သူတို့ကိုတော်ကိုနှိုးဆော်ခဲ့သူ Confederations ဆန့်ကျင်ပိုပြီးပြင်းထန်သောလျှပ်စစ်လှုပ်အုပ်ချုပ်ခွင့်, 1971), နှင့်သုတေသီများတိုးလာကျူးကျော်အဖြစ်ကဤထက်ပိုပြင်းထန်သောလှုပ်ဘတ်ပါ၏။ ဤရွေ့ကားသုတေသီများညစ်ညမ်း (Malamuth ၏အစွန်းရောက်အမျိုးသမီးဝေဖန်မှုထည့်သွင်း, 1978), ကြောင်းညစ်ညမ်းမုဒိမ်းမှု, ကျူးကျော်များနှင့်ကျားမမညီမျှမှု (Brownmiller ချိတ်ဆက်နိုင်ထိန်းသိမ်းထားသော 1975; စယ်, 1988) ။ အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်အကြမ်းဖက်မှုကိုဖော်ပြသည့်ရုပ်ပုံများပါ ၀ င်သည့်အခါညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏လူမှုရေးထိခိုက်နစ်နာမှုကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ 1986) ။ စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများကိုလည်း tenuously အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအတွင်းညစ်ညမ်း implicating, သုတေသီအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ကျူးကျော်များအကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်သွယ်မှုဆွဲရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
ညစ်ညမ်းသည့် 1980s အတွက်အငွငျးပှား
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ကျူးကျော်မှုအကြားစမ်းသပ်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းလာသည်နှင့်အမျှ (၁၉၈၀) အစောပိုင်းကာလများ (Donnerstein & Berkowitz, 1981; Linz၊ Donnerstein & Penrod, 1984; Zillmann & Bryant, 1982)၊ အစိုးရကော်မတီ ၃ ခု (၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိဝီလျံကော်မတီနှင့်ကနေဒါရှိဖရေဇာကော်မတီနှင့် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရှေ့နေချုပ်ကော်မရှင်၊ ကော်မရှင်) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဤသုတေသနကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ 1988) ။ ဤရွေ့ကားကော်မတီများအရပ်ဘက်လွတ်လပ်ခွင့် (Brannigan နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များထံမှချွန်ထက်ဝေဖန်မှုကိုဆွဲငင် 1991; Fisher & Barak, 1991; Segal, 1990) နှင့်ရန်လိုသောသုတေသီများကိုယ်တိုင်အစိုးရ၏ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုလိုင်စင်ပေးသောသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကြောင့်အလွန်အံ့အားသင့်သွားကြသည် (Linz, Penrod, & Donnerstein, 1987; Wilcox, 1987) ။ ရလဒ်အနေနှင့်များစွာသောသူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစာပေများကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုလျော့နည်းသွားပြီးအချို့သုတေသီများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏လူမှုရေးထိခိုက်နစ်နာမှုအတွက်ခိုင်လုံသောအထောက်အထားမရှိခြင်းကိုဖော်ပြရန်သုတေသီများ၏ဝေဖန်မှုများကို ကိုးကား၍ (G. Rubin, 1993).
ဒီဖြစ်ပွားနေသောရုန်းကန်တစ်လျှောက်လုံးဗဟိုဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျန်ရစ်: လူမှုရေးသိပ္ပံအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးမှညစ်ညမ်းစားသုံးမှုချိတ်ဆက် incontrovertible, ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အထောက်အထားကိုရှာဖွေနိုင်မလား အဆိုပါသဘောတူညီမှု, ထို့နောက်ယခု (မနိုင်ကြောင်း Boyle ဖြစ်ပါသည်, 2000; Jensen, 1994) ။ ထိုကဲ့သို့သောချိတ်ဆက်မှုတည်ရှိနေလျှင်ပင်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များသည်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအထောက်အထားများကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲစေသည်။ သုတေသီများသည်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ဖြစ်စေ၊ 1986) ။ ရရှိနိုင်သောအထောက်အထားသည်မသင့်လျော်သောကြောင့်ငြင်းခုံဆွေးနွေးမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အများသဘောတူမှုမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလူအများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားအန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုရှုမြင်ကြသည် (Fisher & Barak, 1991) ။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ကျူးကျော်ကြားရှိဆက်သွယ်မှုရှာဖွေစူးစမ်းသုတေသနအနည်းငယ်မှတ်သားလောက်ခြွင်းချက် (ဥပမာ Malamuth et al အတူအဖြစ်ကောင်းစွာအရှိန်ကျသွားပေမဲ့။ , 2000).
ညစ်ညမ်းသည့် Fore သို့ရောက်လာသောအခါ, အမျိုးသမီးအသံအမျိုးသမီးများက၎င်း၏အလွန်အမင်းပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ပုံဖော်ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ, ညစ်ညမ်းသူတို့ကိုဆန့်ကျင်ကျူးလွန်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှု၏လုပ်ရပ်များခံစားအမျိုးသမီးတွေသရုပ်ဖော်တဲ့မုသားသောစိတ်ကူးရှုတ်ချဖို့အမြန်ကြ၏ Brownmiller, 1975; Millett, 1970) ။ ဤရွေ့ကားအသံ (ဥပမာ Dworkin, 1985; MacKinnon, 1985) ကို ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများအားဆန့်ကျင်သောအပြာစာပေရုပ်ပုံများအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလျှော့ချရန်ရည်မှန်းထားခြင်းဖြစ်သည် (Kirkpatrick & Zurcher, 1983) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အမျိုးသမီးများအားမုဒိမ်းမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်အထီးကျန်ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျားမမညီမျှမှုကိုဆက်လက်တည်တံ့စေရန်၊ ဤရာထူးသည်နောက်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းပြည်သူ့မျက်နှာသာရခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးနှစ်ခုလုံးတွင်လွှမ်းမိုးမှုများပြားလာခဲ့သည် (Fraser Commission, 1985) နှင့်ပညာသင်နှစ်ရီနာကှငျး (စယ်, 1988).
သို့သျောလညျးအားလုံးမဟုတ်အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများ antipornography လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများရာထူးနှင့်နည်းဗျူဟာနှင့်အတူအဆင်ပြေခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအမျိုးသမီးရေးဝါဒီများမကြာခဏပြုလုပ်ညစ်ညမ်းမကြိုက်ဘူးဆိုတာကို, ဒါပေမယ့်အစိုးရကကန့်သတ် ( G. အ Rubin ကမြွက်ဖို့လုံလောက်တဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုမဟုတ်ခဲ့ဝန်ခံတစ်ဦး anticensorship ရပ်တည်ချက်ယူ 1993; Strossen, 1993) ။ များစွာသောသူများသည်အခြားကိစ္စရပ်များတွင်အမျိုးသမီးရေးရာစည်းမျဉ်းများနှင့်တန်ဖိုးများကိုတက်ကြွစွာဆန့်ကျင်သောကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ခရစ်ယာန်ကွန်ဆာဗေးတစ်များနှင့်ပူးပေါင်းရန်အင်မတန်ခက်ခဲသည် (Ellis, O'Dair, & Tallmer, 1990; G. အ Rubin က, 1993; Strossen, 1993) ။ ပညာရေးကဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ကြောင်း၊ အတွေးအခေါ်များ၏စျေးကွက်သည်နောက်ဆုံး၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်လည်းလျော့နည်းစေသည် (Carse, 1995).
အချို့သောပညာရှင်များညစ်ညမ်းတဲ့အားကောင်းကာကွယ်ရေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသူကို, သို့သော်, ရှိခဲ့သည်:
အဆိုပါအမျိုးသမီးဝေဖန်မှုမှန်ကန်လျှင်, ချန်ပီယံမှညစ်ညမ်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သည် "အစစ်အမှန်ပျက်ဆီး" ၏မျက်နှာကိုအတွက်စိတ်ကူးများ၏ဈေးတစ်ဦးအချည်းနှီးသောနှင့်တုံ့ပြန်ခြင်းအငြင်းအခုံဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းသည့်အမျိုးသမီးတိုက်ခိုက်မှုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ရှိလျှင်, လစ်ဘရယ်သည်းခံစိတ်၏ကျော်လွန်ပြီးတစ်ဦးမျှတမှုလိုအပ်ပါသည်။ (Sherman, 1995, p ။ 667) ။
နှောင်းပိုင်း 1990s အသုံးပြုပုံအမျိုးမျိုးသောအမျိုးသမီးရေးဝါဒီများကြောင့်ညစ်ညမ်းငြင်းခုံ, ဒီမျှတမှုများကိုပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြသည်ကျန်းမာ uninhibited အမျိုးသမီးလိင် (Lubey, အားပေးကူညီပေးခဲ့သည် 2006) ။ ညစ်ညမ်းသူတို့ကိုရန်, ကိုယ်ပိုင်ညာဘက် (Chancer အတွက်ကျင်းပရကျိုးနပ်မီဒီယာခဲ့သည် 2000).
ဤငြင်းခုံမှုများအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Victor ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲလှပေမဲ့အစွန်းရောက်သားအမျိုးသမီးရေးဝါဒီများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအထူးသဖြင့်သူ Andrea Dworkin (Boulton ၏အသေခံပြီးနောက်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမှေးမှိန်ခဲ့ပြီး 2008) ။ ညစ်ညမ်းအပေါ်အစွန်းရောက်အမျိုးသမီးရှုထောင့်ဝေးသောအရပ်မှပညာရေးဆိုင်ရာဟောပြောချက် (Bianchi ကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပေမဲ့ 2008), ညစ်ညမ်းဆီသို့အမျိုးသမီးသဘောထားတွေတစ်ဦးအပြုသဘောဦးတည်ချက် (ကာရိုး et al အတွက်အားကိုးဖို့စတင်ကြပြီသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ , 2008).
ညစ်ညမ်းကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်ဆင်ဆာဆန္ဒထိုကဲ့သို့သောရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏တည်ငြိမ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုအဖြစ်ဆင်ဆာကိစ္စများမှမပြောတတ်မသက်ရောက်မှုများအတွက်အနည်းငယ်သာအခန်းထဲမှာကျန်ရစ်, မုဒိမ်းမှု, အကြမ်းဖက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးမှ၎င်း၏ကွန်နက်ရှင်အပေါ်တစ်ဦး laserlike အာရုံစိုက်ဖို့ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအကြားဆက်သွယ်မှုဟာ 1970s (စိန်ကတည်းကအကြိမ်ကြိမ်ဆန်းစစ်ခဲ့ပြီး, 2009), ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကွာရှင်းအကြားအသင်းအဖွဲ့, Kendall (အလယ်ပိုင်း 2000s သည်အထိ unexamined ကျန်ရစ် 2006; Shumway & Daines, 2012; Wongsurawat, 2006) ။ အလားတူစွာစမ်းသပ်မှုများစွာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မုဒိမ်းမှုအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားများကိုဆန်းစစ်ထားသည် (Mundorf, D'Alessio, Allen, & Emmers-Sommer, 2007ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏မိသားစုသက်ရောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ခုရှိသည် (Gwinn, Lambert, Fincher, & Maner, 2013; Zillmann & Bryant, 1988a) ။ ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ၏မိသားစုများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုသည်ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်နှေးကွေးခြင်းဖြစ်သော်လည်းမကြာသေးမီကသုတေသနကဤလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းပြန်လှန်စေခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျူးကျော်မှုနှင့်မုဒိမ်းမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည်မိသားစုတည်ငြိမ်မှုအတွက်လေ့လာမှုမပြုရသေးသောသက်ရောက်မှုများဆက်လက်ရှိနေသည်။
အပြာစာပေရုပ်ပုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသုတေသနပြုခြင်းသည်ခက်ခဲသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုတေသီများအသုံးပြုသောချဉ်းကပ်နည်းနှင့်နည်းလမ်းများမှာမတူကွဲပြားသည်။ ဤသက်ရောက်မှုများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းသည်မူလအားဖြင့်ပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်ကျသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ငါသုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုရှုမြင်ခဲ့ကြပုံကိုအခြေခံပြီးအပေါ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်, ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။
မိသားစုသက်ရောက်မှုမှန်ဘီလူး၏အသုံးချနေမှာတော့ကြောင့်ညစ်ညမ်းအလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတတျနိုငျသရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏ရှုထောင့်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ပညာရှင်များ, Manning အတွက်အကျဉ်းချုပ် (ယုံကြည်မှုအပါအဝင်ကျေနပ်စရာ, တည်ငြိမ်ဆက်ဆံရေးကို, ကိုဖော်ပြရန်ကြောင်း attribute တွေ, သစ္စာ, ဆက်သွယ်ရေး, shared တန်ဖိုးများ, အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘော interaction က၏ကြိမ်နှုန်း, အကြိမ်ရေများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အရည်အသွေးမျှော်လင့်ချက်များနှင့်မွဲ၏ယူဆချက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ 2006) ။ အားလုံးကတော့အောင်မြင်သောဆက်ဆံရေးအတူတူဒီဂရီဤလက္ခဏာများ embody, ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းသည်ဤလက္ခဏာများတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပြသနိုင်ပါတယ်လျှင်, ညစ်ညမ်းရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုသက်သေအထောက်အထားဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးမှတဆင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်ညစ်ညမ်း၏အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုအပါအဝင်ညစ်ညမ်းသည်ဤဝိသေသလက္ခဏာများကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, တိကျသောနည်းလမ်းများ, ဖော်ပြရန်; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုလျော့ချကြောင်းသက်ရောက်မှုနှိုငျးယှဉျ; ကတိကဝတ်ကိုလျှော့ချထားတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအခြားနည်းလမ်း၏ပြောင်းလဲသဘောထားအမြင်; ဖောက်ပြန်၏တိုးမြှင့်လက်ခံမှု; အနုတ်လက္ခဏာဖက်အပြန်အလှန်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, ရာအပြုအမူပေါ်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဆိုးကျိုးများ (ဥပမာကျူးကျော်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်, sexism) ။ ဂဏန်း 1 ဤအဆက်သွယ်မှုသရုပ်ဖော်, သူတို့အခြေခံသောသီအိုရီအမြင်များ။
အများဆုံးသုတေသနအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ပေမဲ့အနည်းငယ်လေ့လာမှုများညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုကက်တလောက်ပါပြီ။ ဆုံးပြီးပြည့်စုံသောအားထုတ်မှု (McKee, Albury နှင့် Lumby အားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်2008)၊ သူသည်သြစတြေးလျမှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများကိုသူတို့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုသူတို့ဘ ၀ များတွင်မည်သို့ခံစားခဲ့ရကြောင်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်စားသုံးသူများအားလိင်အကြောင်းဖိနှိပ်မှုလျော့နည်းစေခြင်း၊ လိင်အကြောင်းပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း၊ အခြားသူများ၏လိင်မှုကိစ္စကိုသည်းခံခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပျော်မွေ့ခြင်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးစွမ်းခြင်း၊ မိတ်ဖက်တစ် ဦး ၏လိင်ဆန္ဒများကိုပိုမိုဂရုပြုခြင်း၊ စားသုံးသူများကမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းကိုရှာဖွေခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏မိတ်ဖက်များနှင့်လိင်အကြောင်းပြောဆိုရန်ကူညီခြင်း။ ဤရိပ်မိအကျိုးခံစားခွင့်များကိုကြီးမားသောဒတ်ခ်ျအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူငယ်များအတွက်သက်သေပြခဲ့သည် (Hald & Malamuth, 2008ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်လိင်မှုကိစ္စအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်း၊ လိင်အပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထား၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်၎င်းတို့၏ဘဝတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းများထက်သိသိသာသာပိုကောင်းသောအပြုအမူများရှိသည်ဟုသူကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ မိတ်ဖက်များအနေဖြင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသည့်အမျိုးသမီးများ၏စစ်တမ်းတစ်ခုတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုတွင် ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များစားသုံးမှုသည်အမျိုးမျိုးရှိသည်ဟုခံစားမိကြသည် (Bridges et al ။ , 2003) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာအချို့ဖြေဆိုသူသူတို့တစ်တွေအပြုသဘောဆောင်အတွေ့အကြုံကိုအဖြစ်မြင်သောစုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်အတူတကွညစ်ညမ်းသုံးပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
စားသုံးသူများ၏အပြုသဘောဆောင်အတွေ့အကြုံများလျှော့ခံရဖို့မဟုတ်ပေမယ့်အဲဒီ Self-သဘောထားအမြင်န့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုတွေအတွက်နမူနာသေချာပေါက်ညစ်ညမ်းစားသုံးသူများ၏လူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မရှိကြပေ။ တစ်ဦးညစ်ညမ်းမဂ္ဂဇင်းပေးသွင်းပြီးဖြေဆိုသူဥပမာ, သဘာဝကျကျညစ်ညမ်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုအပြစ်လွတ်မယ်လို့သက်ရောက်မှု (ရေလွှမ်းမိုးဖို့တက်ရောက်ရန်သင့်တယ် 2013) ။ ထို့အပြင်လူငယ်လူရွယ်များ၏နမူနာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ မတူကွဲပြားသောခံစားမှုမျိုးရှိနိုင်သည့်ကတိသစ္စာပြုထားသည့်ဆက်ဆံရေးရှိလူကြီးများကဲ့သို့စားသုံးသူများကိုကိုယ်စားမပြုနိူင်ပါလိမ့်မည် (Bergner & Bridges, 2002) ။ ထိုသို့သောအကျိုးကျေးဇူးများသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအတွေ့အကြုံမဖြစ်နိူင်သောပညာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ် relational ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအဓိကအသုံးပြုသောစားသုံးမှုပုံစံကိုဖော်ပြသည်။ (Cooper, Morahan-Martin, Mathy, & Maheu, 2002).
ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများသည်စားသုံးသူများသတိမပြုမိဘဲနေနိုင်သည် (Hald & Malamuth, 2008) ။ မိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ခြင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုပုံပျက်စေနိုင်သည်။ ဤစိတ်သဘောထားသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ကောင်းမွန်စွာတည်ထောင်ထားသည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထင်ဟပ်သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အခြားသုံးစွဲသူများအားသူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်ထက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည် (Lo, Wei, & Wu, 2010).
လိင်ဆိုင်ရာပညာပေးသူနှင့်လိင်ဆိုင်ရာပညာပေးဆရာ ၀ န်များအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားများကသက်သေထူသည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများလေ့လာမှုအစောဆုံးလေ့လာမှုအရလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောပစ္စည်းများကြည့်ရှုခြင်းသည်နှိုးဆွနိုင်ပြီးများသောအားဖြင့်ပျော်စရာကောင်းနိုင်သည် (US Obscenity and Pornography on US Commission, 1972) ။ အမြိုးသမီးမြားအပေါငျးတို့သညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုကိုလိင်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (Rogala & Tydén, 2003), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အလိုဆန္ဒများနှင့်ပတ်သက်။ မိတ်ဖက်များအကြားဆက်သွယ်ရေးကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ (Daneback, Traeen, & Maansson, 2009), နှင့်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုချဲ့ထွင်နိုင်သည် (Weinberg, Williams, Kleiner, & Irizarry, 2010) ။ မိတ်ဖက်ပျက်ကွက်သို့မဟုတ်အသုံးမပြုနိုင်သည့်အခါညစ်ညမ်းလည်း, (Hardy လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှတ်ပေးရန်တစ်နည်းလမ်းများနိုင်ပါတယ် 2004; Parvez, 2006) ။ ပညာရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ညစ်ညမ်းမိန်းမတို့အဘို့ထက်ယောက်ျားကပိုအဘို့ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးနှင့်နည်းစနစ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့; Donnelly, 1991ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများမှဖော်ပြထားသောပညာရေးသည်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိမရှိမသေချာသော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ပညာပေးပုံရသည်၊ အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုအားပေးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် (ဥပမာ၊ အပြာစာပေရုပ်ပုံများတွင်ဖော်ပြထားသောလိင်အများစုသည်အကာအကွယ်မဲ့ဖြစ်သည်; Stein, Silvera, Hagerty, & Marmor, 2012), လိင်အပေါ်ပရိယာယ်သဘောထား (Peter & Valkenburg, 2006) နှင့်မုဒိမ်းမှုဒဏ္(ာရီများ (Allen, Emmers, Gebhardt, & Giery, 1995).3
ယူဆ cathartic ဆိုးကျိုးများ
သုတေသီများရှည်လျားပြီးညစ်ညမ်းမဟုတ်ရင်ကျူးကျော်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး (Wilson ကအားပေးလိမ့်မယ်လို့လွှတ်ပေးရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုကူညီပေးနေတစ် cathartic အခန်းကဏ္ဍရှိစေခြင်းငှါယူဆခဲ့ကြ 1971) ။ သုတေသီများကကက်သရင်းအယူအဆသည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိခြင်းနှင့်အဓိကအားဖြင့်မထောက်ခံကြောင်းတွေ့ရှိရသော်လည်း (Allen, D'Alessio, & Brezgel, 1995; ဖာဂူဆန်၊ 20091998 ထံမှ), ပြည်နယ်အဆင့်ဒေတာ 2003 ဖို့, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ရရှိမှု, မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားအခက်အခဲကိုအင်တာနက်မလိုပဲညစ်ညမ်းလေးလည်း (Kendall ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ 15-19-အနေနဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုသည်အသက်အထီးအကြားသိသိသာသာလျော့နည်းသွားကြောင်းထုတ်ဖေါ်, အဆတိုးအတက်သည့်အခါ 2006) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကြောင့်ညစ်ညမ်းအထီးမြီးကောင်ပေါက်အဘို့အအဓမ္မပြုကျင့်မှုတစ်ခုအစားထိုးအဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကလေးညစ်ညမ်းနေတဲ့အချိန်များအတွက်ဥပဒေရေးရာရှိရာဒေသများရှိကလေးကဗလက္နှုန်းထားများဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာအချိန်ကိုထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းစိန် (မရရှိနိုင်ခဲ့စဉ်ကာလအတွင်းအလားတူ, ဗလက္အတွက်ကျဆင်းခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်, 2009) ။ ဤလေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုသည်အနည်းဆုံးစုစုပေါင်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အခြေအနေများ၏ကန ဦး အထောက်အထားဖြစ်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများပိုင်ဆိုင်သည်ဟုပြစ်မှုထင်ရှားသူများသည်ကလေးများကိုအနှောက်အယှက်ပေးဖွယ်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့သော်အနည်းဆုံးလေ့လာမှုတစ်ခုအရ (Bourke & Hernandez, 2009).
ဤရွေ့ကားအကျိုးကျေးဇူးများကိုရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ လေ့လာမှုများ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (Johnston လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်တိုးချဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ကြပါပြီ 2013; Štulhofer, Buško, & Schmidt, 2012) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေမဟုတ်ဘဲစုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှုထက်တစ်ဦးချင်းစီဆနျးစစျပမေယျ့, ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်ကဒီအမှန်အလားအလာအကျိုးရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
တစ်ဦးရင်ခုန်စရာအခြေအနေတွင် (မန်းအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဆန်းစစ်အစောပိုင်းအလုပ်နေသော်လည်း 1970), ကသိသိသာသာအရေအတွက်ဒေတာဥပမာ Gwinn et al (ရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာကြပြီအတိတ်5နှစ်များတွင်သာဖြစ်ပါတယ်။ , 2013) ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏ကျူးလွန်သောဆက်ဆံရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများပိုမိုရှင်းလင်းလာသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အချစ်ဇာတ်လမ်းအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်လမ်းကြောင်းသုံးခုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်စတင်သည် - (က) ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ (ခ) အခြားရွေးချယ်စရာများ၏အထက်သို့တန်ဖိုးများနှင့် (ဂ) သစ္စာမဲ့မှုကိုလက်ခံခြင်း။ ငါကျူးလွန်သောဆက်ဆံရေးတွင်ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ကွာရှင်းခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာပြီးနောက်ဤအပိုင်းကိုအချစ်ဇာတ်လမ်းတွင်ဆန်းစစ်ခြင်းမရှိသော်လည်းမည်သို့မည်ပုံအရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုများရှိသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်ငါအဆုံးသတ်သည်။ ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု - ကျူးကျော်မှု၊
ဒီသုတေသနစဉ်းစားတဲ့အခါ, သူကရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှစ်ခုသီးခြားပုံစံများအကြားတွင်ခြားနားချက်များဆွဲရန်အသုံးဝင်သည်။ ပထမဦးဆုံးမိတ်ဖက်သူတို့၏လိင်ပိုင်းအတှေ့အကွုံမြှင့်တင်ရန်အတူတကွညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သည့်အတွက်စားသုံးမှု၏တစ်ဦးထက်ပိုသောစံပြ mode ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယဖွယ်ရှိပိုပြီးဘုံ mode ကို (Cooper က et al ။ , 2002စားသုံးသူများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုသုံးစွဲသူမဟုတ်သောသူများထံမှဖုံးကွယ်နေသောကြောင့်တစ် ဦး တည်းစားသုံးမှုသည်လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်လှည့်စားခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်သည် (Bergner & Bridges, 2002) ။ အထောက်အထားများအရနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်စားသုံးခြင်းသည်စွန့်စားမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နေသော်လည်းပထမပုံစံသည်ကျူးလွန်သောဆက်ဆံရေးကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည် (Maddox, Rhodes, & Markman, 2011) ။
ပိုပြီးတိတိကျကျဖြစ်စေရန်, Maddox et al ။ (2011) အတူတကွညစ်ညမ်းစားသုံးသူများအဖြစ်တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးတည်းညစ်ညမ်းစားသုံးရသောသူတို့နှင့်အတူညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှခဲ့သောစုံတွဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်တစ်ဦးတည်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးရာတစျခုသို့မဟုတျရှိသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ထက်ဆက်သွယ်ရေး, ကြားဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းမှု, ကတိကဝတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဖောက်ပြန်၏အတိုင်းအတာတွင်, မဖက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးသည့်အတွက်စုံတွဲများပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဆကျဆံရေးအရည်အသွေးကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မိတ်ဖက်သာအတူတူညစ်ညမ်းစားသုံးရသောစုံတွဲများ, သို့သော်, (နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်စားသုံးသူအကြားဖောက်ပြန်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို 18.2% vs. 9.7% မှာ, ထက်နှစ်ဆနီးပါးကြောင်း nonconsumers ၏ဖြစ်ခဲ့သည်ဖောက်ပြန်၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ) ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှသောသူတို့အားအလားတူဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေးအသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ပြုတိုက်ပိတ်စားသုံးသူထက်ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှပိုမိုမြင့်မားအနုမောဒနာပြုပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နှင့်တိုက်ပိတ်စားသုံးမှုပေါင်းစပ်သောအခါ, ရလဒ်များပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ် Maddox et al (အဆုံးစွန်ထက်ယခင်နှင့်အတူ align ။ , 2011).
ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသောအခြားတစ် ဦး ချင်းစီမှအသိပေးသည့်ဘုံစံနှုန်းတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည် (Kenrick & Gutierres, 1980) အဖြစ်ကောင်းစွာငါတို့စောင့်ကြည့်မီဒီယာအားဖြင့်။ ယောက်ျားများသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီးများ၏ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်ထောင်ဖက်၏ဆွဲဆောင်မှုကိုဆုံးဖြတ်သောအခါ၎င်းတို့သည်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတွေ့မြင်ကြပြီးသူတို့၏ပုံသဏ္toာန်များနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိသောယောက်ျားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်များ (Kenrick, Gutierres, & Goldberg၊ 1989) ။ ဒါဟာတူညီတဲ့မူအရလည်းဆက်ဆံရေး၏အခြားရှုထောင့်မှလျှောက်ထားစေခြင်းငှါ,: "အခမဲ့-ဝိညာဉ်ညစ်ညမ်းအတွက်မတူညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံတစ်ဦးချွန်ထက်သည့်ကန့်သတ်သာရှိပြီးပြည်ပမှဆနျ့ကငျြဘ, ကတိကဝတ်များနှင့်မိသားစုနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ဆက်စပ်တာဝန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အဆုံးစွန်သောလုပ်အဖြစ်အထူးသဖြင့်ကန့်သတ်ပုံပျေါလွင်" (Mundorf et al ။ , 2007, p ။ 85) ။
Zillmann နှင့် Bryant (1988bတစ် ဦး ချင်းအား ၆ ပတ်ကြာအကြမ်းမဖက်သောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို ၆ ပတ်အတွင်းဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းသာမကချစ်ခင်ခြင်း၊ လိင်ဆိုင်ရာသိလိုစိတ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များအရသူတို့၏ (များသောအားဖြင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း) မိတ်ဖက်များနှင့်ကျေနပ်အားရမှုကိုတိုင်းတာသည်။ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထိတွေ့သူများသည်ဤအစီအမံတစ်ခုချင်းစီအပေါ်စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကထောက်ခံမှုရရှိသည်။ ဆက်ဆံရေးတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည် (Bridges & Morokoff, 2011; Poulsen, Busby နှင့် Galovan, 2013) ။ ရီးရဲလ်အသက်, ပုံညစ်ညမ်းနှင့်အတူသာသာထိုးထိုးနှိုင်းယှဉ်မထားဘူး။
စားသုံးသူများကသူတို့၏မိတ်ဖက်များ၏လက္ခဏာများနှင့်အပြုအမူများကိုမည်သို့ရှုမြင်သည်ကိုပြောင်းလဲပစ်မည့်အစားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ဆက်ဆံမှုပြင်ပရှိအခြားသူများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်ဟုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေနိုင်သည် (Zillmann & Bryant, 1984) ။ ဤနည်းလမ်းများသည် ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလာသည်နှင့်အမျှလက်ရှိဆက်ဆံရေးကိုကတိကဝတ်သည်ယုတ်လျော့သွားစေသည်။1980) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမော်ဒယ်။ ဒါကစိတ်ကူးလေ့လာမှုများနှစ်စုံအတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာလမ်းဘတ်, Negash, Stillman, Olmstead နှင့် Fincham (2012) တိုးမြှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု (ယခင် 30 နေ့ရက်ကာလ၌ညစ်ညမ်း website ကိုအမြင်များ) တစ်ဦးကလက်ရှိရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ဖို့အောက်ပိုင်းကတိကဝတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်, ထိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအွန်လိုင်းမှချက်တင်အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူတိုးပွားလာ flirtation နှင့်ဆက်စပ်နှင့်ကတိကဝတ်လျော့နည်းသွားခဲ့သရုပ်ပြ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဖောက်ပြန်အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့ကမကထပြုခဲ့။4
Gwinn et al ။ (2013) ကိုလည်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းများနှင့်အတူရစေတယ်တစ်ဦးချင်းစီထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုး high-quality ရင်ခုန်စရာအခြားနည်းလမ်းအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ယခင် 30 ရက်ပေါင်းအတွက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု () ကိုရိပ်မိ၏အခြားရွေးချယ်စရာအရည်အသွေးကိုအတူ 12 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင် (ဥပမာ,, နမ်းရှုပ်ပရောပရည်, cheat) extradyadic အပြုအမူခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိရ ဒီအသင်းအဖွဲ့ဖြန်ဖြေ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအရှင်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးဟာအခြားရွေးချယ်စရာ၏သဘောထားအမြင်မှတဆင့် extradyadic အပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာသားများကိုပြောင်းလဲရန်အလားအလာရှိကြောင်းပညာရှင်များကအမြန်ဆုံးပြောကြားခဲ့သည်။ လိင်မှုကိစ္စ (နှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးများယေဘုယျအားဖြင့်) မည်သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက် (Berger, Simon, & Gagnon, 1973) ကတညျးဆက်ဆံရေးဟာစံချိန်စံညွှန်းများ (ဥပမာ, ဘယ်လိုမကြာခဏခံတွင်းလိင်ပေါ်ပေါက်သင့်ပါတယ်) နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ (ဥပမာ, သစ္စာ) အကြောင်းကြား။ ဤသည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းအပြင်ပန်းကပိုထိရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ (Berger et al ကိုအတူတစ်ဦးအပြုသဘောအလငျး၌တင်ပြခဲ့ပါသည်။ , 1973) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်အများအားဖြင့်မကျူးလွန် - နှင့်မကြာခဏအတိအလင်းသစ္စာမဲ့ခြင်း - လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပုံဖော်သောကြောင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ခွင့်ပြုထားသောလိင်ဇာတ်ညွှန်းကိုတိုးပွားစေပြီး extradyadic အပြုအမူကိုလက်ခံခြင်းကိုတိုးပွားစေသည် (Braithwaite, Coulson, Keddington, & Fincham, 2014).
တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်အကြမ်းမဖက်သောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုလက်ခံခြင်းနှင့်လက်မထပ်ဘဲလိင်ဆက်ဆံမှုနှုန်းကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ခြင်းဟူသောခိုင်လုံသောအထောက်အပံ့ကိုရရှိနိုင်သောအချက်အလက်များမှာ (Zillmann & Bryant, 1988a) ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စသည်သဘာဝဖြစ်ပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနည်းပါးသည်ဟုယုံကြည်ရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့သည့်အမျိုးသားများသည်လည်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလက်ခံရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရသောလိင်အပြုအမူများတွင်မပါ ၀ င်သူများထက်ပိုမိုများပြားသည်။ Wright & Randall, 2012) ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုလည်းပြောင်းပြန်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် (Wright, မရှိသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူ3နှစ်ကြာပြီးနောက် (extramarital လိင်အပါအဝင်) ပေါ့ပေါ့လိင်အပြုအမူကိုခန့်မှန်း 2012).
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏အထွေထွေအကျိုးသက်ရောက်မှုများမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုစားသုံးသူမှဖြစ်စေ၊ စားသုံးသူ၏မိတ်ဖက်ဖြစ်စေပြ'sနာအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည့်ကိစ္စများရှိသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ဤမိတ်ဖက်များသည်များသောအားဖြင့်မလုပ်မနေရပြုရလွယ်သောလိင်အပြုအမူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်စားသုံးမှုနှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးသမီးများဖြစ်သည် (Schneider, 2000) ။ ဤအမျိုးသမီးများမှပြုလုပ်သောဇာတ်လမ်းများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်ပြproblemနာဖြစ်လာသည့်အခါမည်သို့ဖြစ်သွားသည်ကိုဖော်ပြသည် (Bergner & Bridges, 2002; Schneider, 2000).
Schneider (2000) ဥပမာအားဖြင့်မိတ်ဖက်၏ဆိုက်ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများခံစားခဲ့ရသောအမျိုးသမီး ၉၁ ဦး (နှင့်အမျိုးသားသုံး ဦး) ၏ဇာတ်ကြောင်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အပြုအမူအပေါ်သစ္စာဖောက်မှု၊ စွန့်ပစ်ခံရခြင်း၊ အရှက်ခွဲခံရခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရှိအမျိုးသမီးများနှင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အရ၎င်းတို့နှင့်မယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းကိုသူတို့သိသိသာသာဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများခံစားခဲ့ရသည်။ သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်လျော်ကြေးပေးရန်ကြိုးစားသူများသည်မအောင်မြင်ပါ။ ထို့အပြင်သင်တန်းသားများကိုမကြာခဏသူတို့သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်ထင်သောမိတ်ဖက်များနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရန်ဆန္ဒမရှိခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလည်းညစ်ညမ်း၏မျက်နှာသာအတွက်လိင်နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်များစွာသောသူတို့သည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးသည်တဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းလာသည်နှင့်အမျှခွဲနေရန်သို့မဟုတ်ကွာရှင်းရန်ကြိုးစားရန်အတွက်ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အလားတူတွေ့ရှိချက်များကိုအခြားသုတေသီများ (ဥပမာ - Bergner & Bridges, 2002) ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုများတွင်အရေးကြီးသောအနှောင့်အယှက်တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်မရိုးမသားပြုခြင်းနှင့်လှည့်စားတတ်သောအပြုအမူများ (Resch & Alderson, 2013) ။ အိမ်ထောင်ဘက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားထုတ်မှုပုန်းအောင်းနေခဲ့ရသည်နှင့်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုအကြောင်းကိုလဲလျောင်းနှင့်မရိုးသားမှုသလောက်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုထက်ပိုမိုထိခိုက်စေခြင်းနှင့်သစ္စာဖောက်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။
ဤအဇာတ်လမ်းများကိုယ်ချင်းစာကျလာသောနိုင်ပေမဲ့, သူတို့ထိုကဲ့သို့သောအတွေ့အကြုံများဘယ်လောက်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြကြဘူး။ သို့သော်တဦးတည်းစစ်တမ်း (Bridges et al ။ , 2003) (၁၀၀ တွင် ၃၀) အမျိုးသမီးအများစုသည်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစိတ်ပျက်စရာအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ စားသုံးမှုတိုးများလာသည်နှင့်အမျှချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများထက်အိမ်ထောင်သည်နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးများက ပိုမို၍ ခံစားကြရသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်က Schneider မှတင်ပြသောအတွေ့အကြုံများ (2000), ဝေးနေရာအနှံ့ကနေသော်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်ထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောဘုံဖြစ်နိုင်သည်။
အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း (GSS) မှအချက်အလက်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု (လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းညစ်ညမ်းဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ခြင်း) နှင့် ၁၉၇၃ မှ ၂၀၁၀ အတွင်းနှစ်များတစ်လျှောက်ကွာရှင်းမှုနှင့်အဆက်အသွယ်များသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းပိုမိုခိုင်မာလာခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစားသုံးသူသည်ပျမ်းမျှဒေတာအစုတွင်မကွာရှင်းသူများထက်ကွာရှင်းရန် ၆၀% ပိုများသည်၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း Doran & Price, 2014) ။ ထို့အပြင်ဆယ်စုနှစ် ၃ ခုကျော်ကာလအတွင်းပြည်နယ်အဆင့်အချက်အလက်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခြင်း (Shumway & Daines, 3) သည်ကွာရှင်းခြင်းနှင့်ရေပန်းစားသည့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောမဂ္ဂဇင်းများအတွက်စာရင်းသွင်းခြင်းနှုန်းအကြားခိုင်မာသောအချိန်ကာလကွာခြားမှုကိုပြသခဲ့သည်။r အချက်များအမျိုးမျိုးများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားသည့်အခါ = .44) ။ Shumway and Daines (2011) ခန့်မှန်းချက်အရ ၁၉၆၀ နှင့် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းကွာရှင်းမှုအားလုံး၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုတေသီများ၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ရန်လိုသောအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်ကျူးကျော်ပုံဖော်ခြင်းများတိုးများလာခြင်းကြောင့်မီးမောင်းထိုးပြသည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု (Bridges, Wosnitzer, Scharrer, Sun, & Liberman, 2010) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ကျူးကျော်မှုကိုဆက်သွယ်ပေးသောတွေ့ရှိချက်များသည်ဆန့်ကျင်နေပုံပေါ်နိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်း meta-analytic data (Allen, D'Alessio, & Brezgel) ၏သိသာထင်ရှားသည့်တသမတ်တည်းသောပုံပြင်ထွက်ပေါ်လာသည်။ 1995; Mundorf et al ။ , 2007) ။ အကြမ်းမဖက်သောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ပစ်မှတ်ထားသူတစ် ဦး သည်လိင်တူချင်းလိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်မှုတိုးပွားစေသည်။ (ဥပမာ Donnerstein & Hallam, 1978) ။ ဒါဟာထိတွေ့ပါဝင်သူတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှား-လွှဲပြောင်းအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီ, အမျက်ဒေါသများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထရှုပ်ထွေးစေခြင်းငှါ, အခါမှသာကျူးကျော်လှုံ့ဆော်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။5
အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ကျူးကျော်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ Meta ‐ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများသည်အကြမ်းမဖက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုအတွက်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြသည် (Allen, D'Alessio, & Brezgel, 1995), အကျိုးသက်ရောက်မှုသိသိသာသာအထီး, ဥပမာ (အမျိုးသမီးဆန့်ကျင် Donnerstein ကျူးကျော်ရန်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါသာလာသောအခါကျူးကျော်ဆောင်ရွက်မှုတွေ, လူတစ်ဦး၏ကျားမတို့ကတည်းဖြတ်နေသည်ပေမယ့်, 1980a) ။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုလိင်နှင့်အကြမ်းဖက်မှုအမျိုးသမီးများအပေါ်ကျူးကျော်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်များ၏ညှိနှိုင်းနည်းလမ်းများ (Donnerstein အတွက်ပေါင်းစပ်ကြောင်းအကြံပြုသောအကြမ်းဖက်မှုများသည်အခြားပုံစံများကိုထိတွေ့ကျော်လွန်ကျူးကျော်အားပေးပုံ 1983) ။ ဤရွေ့ကားဘာသာဂုဏ်ထူး Bandura နှင့်အခြားအပြုအမူသုတေသီများ (Bandura ဖြင့်ရှေ့ဆက်ထားလူမှုရေးသင်ယူမှုသီအိုရီ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရှင်းပြသွားကာစိတ်လှုပ်ရှား-လွှဲပြောင်းအယူအဆကနေသုတေသီများဦးဆောင် 2011; Bandura & McClelland, 1977; Mundorf et al ။ , 2007).6ကျူးကျော်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ရလဒ်များကိုသတိနှင့်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူသင့်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှတွေ့ရှိချက်များကိုအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်အသုံးချနိုင်လျှင်ပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှုသည်မည်မျှကြာရှည်သည်ကိုမရှင်းလင်းနိုင်ပါ။ (မိနစ် ၂၀ ကျော်; Zillmann, Hoyt, & Day, 1974; တစ်ပါတ်ထက်မနည်း Malamuth & Ceniti, 1986), နှင့်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏ပျမ်းမျှပြင်းထန်တဲ့သက်ရောက်မှုအထူးသဖြင့်အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်းဘို့, အထူးသအားနည်း (r = <.2; Allen, D'Alessio, & Brezgel, 1995) ။ မိတ်ဖက်များအကြားပဋိပက္ခအတော်လေးဘုံနိုင်ပါတယ်ရှိရာထိုကဲ့သို့ကန့်သတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားပေးထားသောကြောင့်, (, ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၌တွေ့စေခြင်းငှါကျူးကျော်အပေါ်သိမ်မွေ့သက်ရောက်မှုများအတွက်ကြည့်ဖို့ကြံ့ခိုင်ရေးသဘောမျိုးလုပ်လိမ့်မယ် 2001) ။ တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတုန့်ပြန်မှုများသည်သူတို့၏ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေနိုင်ရန်အတွက်အလွန်ခက်ထန်သောရန်လိုမှုနှင့်တုံ့ပြန်ရန်မလိုပါ။ အစားကြမ်းတမ်းသည့်သို့မဟုတ်လက်စားချေသောစကားစုအပြန်အလှန်၊ စော်ကားမှုသို့မဟုတ်အေးခဲသောပခုံးဖြင့်တုံ့ပြန်လိမ့်မည် (Metts & Cupach, 2007) ။ ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုဟူမူကားအနုတ်လက္ခဏာဖက်အပြန်အလှန်တိုးမြှင့်, တစ်ဦးရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များကနှိုးဆျောကွသောအခါအနည်းငယ်လျော့နည်းမျိုး, အနည်းငယ်ပိုပြီးခုခံကာကွယ်, ဒါမှမဟုတ်အနည်းငယ်ပိုငွိုးအတေးကွီးဖွစျဖို့စားသုံးသူများဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဤအဆိုးကျိုးများတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးမတည်မငြိမ်နှင့်လျော့နည်းကျေနပ်စရာထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးအောင်, တစ်ဦးရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးသင်တန်းပြောင်းလဲပစ်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်အနာဂတ်သုတေသန, (Rusbult ဒီဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်နိုင် 1986).
ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုနှင့်ကျူးကျော်များအကြားဆက်သွယ်မှုကိုကောင်းစွာထောက်ပံ့ထားပေမဲ့အနည်းဆုံးဓာတ်ခွဲခန်း၏နယ်နိမိတ်အတွင်း, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးအကြားဆက်သွယ်မှုကိုပိုပြီး equivocal ဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးစား data တွေကိုညစ်ညမ်း၏တရားဝင်မုဒိမ်းမှု (Wongsurawat ၏ဖြစ်ပွားမှုတိုးမြှင့်တော်မမူကြောင်းညွှန်ပြ, 2006), ဒါပေမယ့်တစ် ဦး ချင်းအဆင့်အဆင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများကလိင် (လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရရှိရန်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့်အင်အားသုံးမှုတိုးမြှင့်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအကြမ်းဖက် (သို့သော်အကြမ်းမဖက်။ ) မဟုတ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှင့်အတူကွဲပြားသောအကောင့်တခုကိုတင်ပြထားသည် (Demaré, Lips, & Briere, 1993) ။ စားသုံးမှုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင် (Boeringer ၏ပြန်ပြောပြလုပ်ရပ်များဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် 1994) နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အကြမ်းမဖက်သော်လည်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့သူများသည်လည်းဖော်ထုတ်ခြင်းမပြုသူများထက်မုဒိမ်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (Check & Guloien, 1989) ။ အဓမ္မပြုကျင့်မှု၏ရုပ်ပုံများကိုဖော်ထုတ်ခံရသည့်အထီးအမများကမိန်းမသည်မိန်းမဖြစ်သည့်ဖြစ်ရပ်အတွက်ပိုမိုတာဝန်ရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ဗီဒီယိုသည်အမျိုးသမီးအော်ဂဇင်ဖြင့်အဆုံးသတ်မှသာ (အကြမ်းဖက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ Donnerstein & Berkowitz၊ 1981ဆက်စပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲအချက်အလက်များ၏), နှင့် Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်အကြမ်းမဖက်နှစ်ဦးစလုံးညစ်ညမ်းတိုးမုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီ (Allen က, Emmers, et al ၏ထောက်ခံချက်တွေ့ပြီ။ , 1995; Mundorf et al ။ , 2007).
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ဤအခြေအနေတွင်အမျိုးသမီးများပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နှင့်အတင်းအကျပ်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုနေပုံရသော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့်ထိုသဘောထားများကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအဓမ္မပြုကျင့်မှုများ၊ ပျောက်ကွယ်သွားစေသည့်အခြားသောပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အတူရုပ်ပုံများပါ ၀ င်သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိမဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားသည် (Check & Malamuth, 1984; Donnerstein & Berkowitz, 1981), Meta-သရုပ်ခွဲဒေတာ (Mundorf et al ကထောက်ခံကြောင်းတစ်ခုအခိုင်အမာ။ , 2007) ။ ထိုသို့သောတွေ့ရှိချက် deleterious သက်ရောက်မှုပူပေါင်းလိင်ပညာရေးအားထုတ်မှုမှတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်မျှော်လင့်ချက်ပေးလေ့ရှိသည်။
စုစုပေါင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းအလိုက်တွေ့ရှိချက်များအကြားဖြစ်ပွားနေသောပconflictိပက္ခသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်မုဒိမ်းမှုတို့အကြားအကြီးမားဆုံးအတားအဆီးဖြစ်နေသည်။ အဆင့်နှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းစစ်ဆေးသည့်သုတေသနသာလျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာအဆင့်များစွာရှိသော linear မော်ဒယ်လ် (MLM; Snijders & Bosker၊ 2011) ဤမတူကွဲပြားသောတွေ့ရှိချက်များကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော်သုတေသီအချို့ကဤကွာဟမှုကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ပုံစံကိုအသုံးပြုသည်။ လိင်ဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုဖော်ပြရန်မှာအမျိုးမျိုးသောအချက်များပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ဤအချက်များတွင်ပါ ၀ င်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ရန်လိုသောအပြုအမူအတွက်အန္တရာယ်ရှိနှင့်ပြီးသားသူများအတွက်သာသိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့မြင်သင့်သည်။ ၎င်းသည်အချို့သူများတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည် (ဥပမာ Malamuth & Huppin, 2005) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကျူးလွန်ခြင်း၏အန္တရာယ်မှာအများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်မှုအပြုအမူမြင့်မားသောသူများ မှလွဲ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူများနှင့်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုမြင့်မားသောသူများအကြား၊ အကြမ်းဖက်အပြုအမူ (Malamuth & Huppin, 2005).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောဤတွေ့ရှိချက်များမှာမိသားစုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများအကြားဆက်နွယ်မှုရှိလျှင်၊ ရက်စွဲသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးမုဒိမ်းမှုနှင့်လည်းဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်သည်။ (ရက်စွဲနှင့်အိမ်ထောင်ရေးမုဒိမ်းမှုအကြောင်းဆွေးနွေးလိုလျှင်၊ Clinton Clinton Sherrod & Walters တွင်ကြည့်ပါ။ ) 2011), အရာမနည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့် ပို. ဘုံလူစိမ်းမုဒိမ်းမှု (ဘာဂန်ထက်ဖြစ်နိုင်သည် 1996) နှင့်လည်းဆက်ဆက်အနုတ်လက္ခဏာမိတ်ဖက်အပြန်အလှန်အဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီလိမ့်မယ်။ ဒေတာအနည်းငယ်သာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏နေ့စွဲသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးမုဒိမ်းမှုအပေါ်တိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်သော်လည်းလေ့လာမှုများအရသူတို့၏ဇနီးများကိုလိင်နှင့်လိင်အလျောက်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည့်ခင်ပွန်းသည်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးပမ်းလေ့ရှိသည် (ဥပမာ - Finkelhor & Yllo, 1983; Moreau၊ Boucher၊ Hebert နှင့် Lemelin၊ 2015) ။ ဒီဒေသမှာနောက်ထပ်သုတေသနလက်ရှိစာပေမှတစ်ဦးကြိုဆိုထို့အပြင်လိမ့်မည်။
စမ်းသပ်မှုအချို့သည်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုနှင့်သဘောထားများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သုတေသီများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူကိုအားပေးလိမ့်မည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ (McKenzie-Mohr & Zanna, 1990) ။ ပါဝင်တက်ရောက်သူအမျိုးသားများသည်အကြမ်းမဖက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း (သို့) ကြားနေထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးကွန်ဖက်ဒရိတ်တစ်ခုမှတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ရိုက်သောလိင်စာရိုက်သူအမျိုးသားများသည်အဖွဲ့ ၀ င်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်များကိုပိုမိုမှတ်မိနိုင်ပြီးသူမ၏အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းများကိုပြန်လည်မမှတ်မိတော့ပါ။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူအမျိုးသမီးကစမ်းသပ်အခြေအနေတွင်မျက်စိမမြင်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ဆက်ဆံသူများအားဘက်မလိုက်သောဗီဒီယိုများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုအလေးထားသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ အယူအဆရေးရာပုံတူပွားခြင်းကအလားတူရလဒ်များကိုရရှိစေသည် (Jansma, Linz, Mulac, & Imrich, 1997),7
သာညစ်ညမ်းလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်ထက် erotica.These စမ်းသပ်သက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းအပေါ်လေ့လာမှုများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားတွေကထောက်ပံ့ nondegrading နှင့်အတူဆိုးကျိုးများပြသခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအပြုသဘောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ (ဘန်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်, 2001) အဖြစ်အကျိုးပြု၏အစီအမံများ (Garos, Beggan, Kluck, & Easton, 2004) နှင့်ရန်လိုသော (Hald, Malamuth, & Lange, 2013) sexism ။ ရန်လိုသော sexism ရမှတ်ကိုလည်းဥပမာ Hald et al (အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်းမှစမ်းသပ်ထိတွေ့မှုတိုးပွားလာနိုင်ပါတယ်။ , 2013) ။ နောက်ဆုံးလေ့လာမှုတွေလျော့နည်းသာတူညီမျှသဘောထား (ဘန်းမှညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်ခဲ့ကြ 2001; Hald et al ။ , 2013) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— - တချို့လူတွေက 1997) ————————————————————————————————————————————————————- ညှိုးငယ်သောအကျင့်စာရိတ္တနှင့်ဆိုင်သောဖော်ပြချက်အရအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုဆန့်ကျင်မှုတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်း၊ 2013) ။ ဤအသင်းအဖွဲ့များကိုအခြေခံသည့်သီအိုရီဆိုင်ရာရှုထောင့်မှာလူမှုလေ့လာမှုဖြစ်သည် စားသုံးသူများကအမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုများအဖြစ်ဆက်ဆံခံရသည်ကိုမြင်သောအခါလိင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ခြင်းကိုထင်ဟပ်စေသောသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများဖြစ်ပေါ်လာသည် (McKenzie-Mohr & Zanna, 1993) ။
Sexism ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏ဒိုင်းနမစ်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမဟုတ်ဘဲအချိန် 'passes အဖြစ်ဆကျဆံရေး သာ. ကြီးမြတ်မကျေနပ်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်အရာကသူတို့ရဲ့အသိဥာဏ်ပညာ attribute တွေ, ထက် (လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုအချိန်ကျော်နိမ်) ကိုသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများပေါ် သာ. ကွီးမွတျတနျဖိုးနေရာယောက်ျားဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ရန်လိုသောလိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားများလည်း coercively ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက် (ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုမြှင့်တင်ရန်မည် Whitaker, 2013), အရှင်အခြားသောလမ်းညစ်ညမ်းအနုတ်လက္ခဏာဖက်အပြန်အလှန်တိုးမြှင့်နိုင်အကြံပြုခြင်း။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်တည်မြဲသောဆက်ဆံရေး၏တည်ငြိမ်မှုကိုသက်သေပြနိုင်သည်။ ဖော်ပြထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခိုင်မာသည့်သီအိုရီအရအခြေပြုပြီးကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့်လည်ပတ်သည်။ လူမှုသင်ယူမှုသီအိုရီ (Bandura, 2011သူတို့သည်လည်းထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပိုပြီးမတူညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်ကိုသင်ယူနိုင်ပေမယ့်)) (ညစ်ညမ်းစားသုံးသူကျူးကျော်များနှင့်အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်များကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်လိင်အရအခွင့်အရေးသို့မဟုတ်စော်ကားသောပုံဖော်ခြင်းရှုမြင်အဖြစ်, သူတို့အပြုအမူတွေကိုထောက်ခံသဘောထားများချမှတ်နှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မိတ်ဖက်သူတို့နှင့်အတူပြဋ္ဌာန်းဖို့သင်ယူနိုင်သောအကြံပြု ။ အလားတူပင်ညစ်ညမ်းဖောက်ပြန် (Braithwaite et al များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေသည်ဟုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ , 2014) နှင့်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်းများသို့မဟုတ်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်တွေ့မြင်သူများနှင့်မမျှတစွာနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည် (Zillmann & Bryant, 1988b) သို့မဟုတ် (Gwinn et al လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ပိုကောင်းနိုင်ကြအဖြစ်ဆက်ဆံရေးအပြင်ဘက်ရှိသူများရိပ်မိရ။ , 2013) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများတစ်ဦးကျူးလွန်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးမျိုး (Schneider များ၏အခြေအနေတွင်ပြဿနာဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိသည်, 2000) နှင့်ကွာရှင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေနိုင်သည် (Shumway & Daines, 2012).
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏မိသားစု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်သေပြရာတွင်အရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုမှာအဖြေမရရှိသေးပါ။ အပြာစာပေများ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်သက်ဆိုင်သူများ - ပညာရှင်များ၊ အစိုးရအရာရှိများသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်စားသုံးသူများ - မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မျက်မှောက်ခေတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလှုပ်ရှားသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဆင်ဆာဖြတ်တောက်ရန်တိုက်ပွဲတွင်ခဲယမ်းအဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆက်စပ်မှုကိုသက်သေအထောက်အထားများကို သုံး၍ အစိုးရများကိုတိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်ဤတွေ့ရှိချက်များကိုပညာရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ပြီးစားသုံးသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏စိတ်နှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားခြင်း၊ ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုလုံးသည်အကျဉ်းချုပ်ဆွေးနွေးသင့်သည်။
ဗြိတိန်-ထုတ်လုပ်ညစ်ညမ်းအဖြစ်အထူးညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ ( R. Hawkins ကမှလက်လှမ်းတောင်းဆိုရန်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်စားသုံးသူလိုအပ်သည်တစ်ခု "ဘေးဖယ်-In" filter ကိုစနစ်၏အကြောင်းအရာအပေါ်မကြာမီကန့်သတ်ချက်များ 2013)၊ အစိုးရများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဥပဒေပြုအရေးယူမှုမှတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဤနေရာတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောသမိုင်းကမူ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဆင်ဆာဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုသည်အန္တရာယ်မရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ယခင်အစိုးရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများမှာများသောအားဖြင့်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစိုးရ၏ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပညာရှင်များနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည်အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်မှချမှတ်ထားသောတူညီသောလူမှုရေးထိခိုက်မှုစံနှုန်းများအပေါ်မှီခိုအားထားနေရသည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ဖော်ပြထားသောအချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောသက်ရောက်မှုများမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်အန္တရာယ်ကြားရှိကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုကိုမပြသသောကြောင့်ဤစံသတ်မှတ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကျူးကျော်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အစောပိုင်းတွေ့ရှိချက်များအရမိသားစု၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချပြီးပယ်ချခံရနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများ၏ဆိုးကျိုးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ပညာရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုများသည်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြီးစားပညာရေးဆိုင်ရာအစပျိုးမှုများ၊ အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများရေးသောအမျိုးသမီးအုပ်စုများ (Ciclitira, 2004ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလူတို့အားအသိအမှတ်ပြုရန်အတွက်မိသားစု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၏သက်သေအထောက်အထားများသည်လတ်ဆတ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောထောင့်ကိုပေးလိမ့်မည်။ သူတို့၏ကျူးလွန်သောဆက်ဆံရေးအပေါ်တန်ဖိုးထားသောစားသုံးသူများသည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသက်သေအထောက်အထားများသည်အစိုးရများအားမိသားစုတည်ငြိမ်မှုအပေါ်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် (ဥပမာ - ဂျပန်နှင့်ရုရှားတို့သည်တစ်ကိုယ်ရေသမားများအားလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်နှင့်မိသားစုများမွေးမြူရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေကြသည်; McCurry, 2011; Rhodin, 2008) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ၏မိသားစုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ပညာရေးကိုပံ့ပိုးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပညာရေးကိုဘာသာရေးနှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများမှလက်ထပ်ထိမ်းမြားသောပညာရေးအစီအစဉ်များအဖြစ်သို့ကူးပြောင်းနိုင်သည်။ လက်ထပ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးသုတေသီများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုအခြေခံသည့်ပညာရေးအစီအစဉ်များ (ဥပမာ - Barnes & Stanley၊ 2012) ။ ထိုကဲ့သို့သောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည်ထိရောက်လိမ့်မည်လားဆိုသည်မှာအခြားပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်များတွင်ပညာရေးအောင်မြင်မှုများ (ဥပမာ - လူထုကိုအသိပညာပေးခြင်းဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ Durkin, Brennan, & Wakefield,) သည်အရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2012) အခြို့အားပေးမှုသည်။
မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်အန္တရာယ်မရှိဟုငြင်းဆန်သူများ (ဥပမာ၊ Diamond, Jozifkova, & Weiss, 2011) ခိုင်မြဲစွာသူတို့အားဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ထိခိုက်စေသူတို့ကွာရှင်းနှင့်ဖောက်ပြန်သူတို့လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ရသော (တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအပြုသဘောသို့မဟုတ်ကြားနေဖြစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုမဟုတ်လျှင်; Christensen, 1986) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကို ၁၉၇၀ ကော်မရှင်ကကြေငြာခြင်းကနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုဟန့်တားစေသည် - ပညာရှင်များစွာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှုများမေးခွန်းများကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်ပြီဟုထင်မြင်ခဲ့ကြသည် (Zillmann, 2000), ထိုသို့နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလှုံ့ဆျောကြောင်းရန်လိုသက်ရောက်မှုသာသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏မိသားစု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်သေပြခြင်းသည်ယနေ့တွင်အလားတူအလားအလာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်မိသားစုသိပ္ပံပညာရှင်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများ - တစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်သူတို့အချင်းချင်းဆက်နွယ်မှုအပေါ်အငြင်းပွားမှုများထပ်မံပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ငါလူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်လူ့သုတေသနကောင်စီအနေဖြင့်ကြင်နာဒေါက်တာ Hanks Stam ဒေါက်တာဆူ Boon ၏ထောက်ခံမှုနှင့်ရန်ပုံငွေဝန်ခံချင်ပါတယ်။